के निद्राले सताउँछ अफिसमा ? - ज्ञानविज्ञान
काम लाग्न सक्छन् यी टिप्स :
Topics #अफिस #निद्रा
Don't Miss it कसरी हटाउने नवजात शिशुको रौँ ?
Up Next किन हुँदैन तेल लगाउन कपालमा चाँया पर्दा ?
यस्ता छन् शरीरका अनावश्यक रौँ फाल्ने तरिका र ध्यान दिनुपर्ने कुरा
शरीरमा अनावश्यक रौँ ले गर्दा समस्या हुने गरेको छ । जुन समस्या हटाउनको लागि हामी विभिन्न किसिमको उपायहरु अपनाउन थाल्छौ ।…
तपाईंलाई टन्सील भएको छ ?
आधुनिक जीवनमा टन्सीलाईटीस अर्थात घाँटीको समस्याले प्राय: जसो घरका एक सदस्य खासगरी केटा-केटिहरुलाई बेलाबखतमा दुख: दिइरहेको हुन्छ । टन्सील शरीरको…
सावधान ! राती बत्ति बालेर सुत्दा यतिसम्म खतरनाक हुनसक्छ
मृत्युको कारण धेरै छन त्यसमा पनि बिभिन्न तथ्यहरु पत्ता लाग्दै गएका छन् । यस्तै तथ्य अनुसार रातिको समयमा बत्ती बालेर…